Venerable Kusalasami: September 2014
Posted by lwin at 11:03 PM No comments:
အသက်၂၁ နှစ်အရွယ်တွင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ ရွှေလရောင်ကုလားပဲခွဲစက်၊ ဒေါ်မြဝင်းကြည်၊ ဒေါ်စိန်လှကြည်၊ ဒေါ်သန်းသန်းအေးနှင့် ဒေါ်နုနုကြည် ညီအစ်မတစ်စုတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟဖြင့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ စိတ္တပါလဂူကျောင်းတွင် ရဟန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာပင် ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရပြီး ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်အထိ B.A (Buddhism) နှင့် M.A (Buddhism) အတန်းများတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
သာသနာ့တက္ကသိုလ် တက်ရောက်စဉ်အတွင်း ပထမနှစ် First Semester နှင့် Second Semester နှစ်ခုလုံး၌ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးဖြင့် ပထမဆု၊ ဒုတိယနှစ်တွင် First Semester ၌ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူး၊ Second Semester ၌ ၅ ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် ပထမဆု၊ တတိယနှစ်တွင် First Semester ၌ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူး၊ Second Semester ၌ ၅ ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် တတိယဆု၊ စတုတ္ထနှစ်တွင် First Semester ၌ ၅ ဘာသာဂုဏ်ထူး၊ Second Semester ၌ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးဖြင့် ပထမဆုတို့ကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာထူးချွန်ဆု၊ ပါဠိဘာသာထူးချွန်ဆုများကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
၂ဝဝ၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော စာချတန်းစာမေးပွဲကို အောင်မြင်သဖြင့် သာသနဓဇဓမ္မာစရိယဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါပြီးနောက်ပိုင်း www.ashinkusala.com ကို ဖွင့်လှစ်ကာ သမထဝိပဿနာတရားအားထုတ်နည်းများ၊ အတွေးအမြင်ဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများ၊ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံဆာင်းပါးများနှင့် ဝတ္ထုများကို ရေးသားခဲ့သည်။ www.facebook.com/Kusalasami နှင့် www.facebook.com/ashinkusalasami တို့တွင်လည်း ဖြန့်ဝေရေးသားလျှက် ရှိသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားစဉ်အတွင်း လင်္ကာတမန်မဂ္ဂဇင်း၌ အယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် ကိုလံဘိုမြို့၊ ကေလနိယတက္ကသိုလ်မှ မဟာဝိဇ္ဇာ(M.A)ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပီနန်မြို့၊ မဟာဓမ္မိကာရာမတရုတ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွင် သာသနာပြုတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ယင်းကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း ခန့်ငြားထည်ဝါလှသော ရွှေစေတီကျောင်းတော်ကြီး (Golden Pagoda Bell Tower) အကောင်အထည်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားမှုနှင့်အတူ ဖွင့်ပွဲကျင်းပပြီးသည်အထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၂/၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း စနစ်တကျ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသည့် ဓမ္မစကူးလ်များ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားသော ဓမ္မစကူးလ်ဖောင်ဒေးရှင်း၌ အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ဖြင့် ကြိုးစားပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စာပေမှတ်တိုင်အနေအားဖြင့် မြေဇင်းကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်နည်း (အရှင်ကုသလသာမိ - ပျော်ဘွယ်)၊ အကြင်နာမဲ့တဲ့ဘုန်းကြီး (အတည်မဲ့)၊ လုပ်ကြံမှုများကြားက ဗုဒ္ဓဘာသာ (အရှင်ကုသလသာမိ - ပျော်ဘွယ်)ဟူသော စာအုပ်(၃)အုပ်ကို နေရီရီစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အညတြခရီးသည် စာအုပ်မှာ စာရေးသူ၏ စတုတ္ထမြောက်စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်၊ နော်ဝေ၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဟော်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဘယ်ဂျီယံ၊ ဖင်လန်၊ ဆွစ်ဇာလန် စသည့် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ အခါအားလျော်စွာ သာသနာပြုခရီးကြွရောက်ပြီး ခရီးသွားအတွေ့အကြုံဆောင်းပါးများနှင့် အခြားအတွေးအမြင်ဆောင်းပါးများကိုလည်း ဆက်လက်ရေးသားထုတ်ဝေသွားရန် ရှိပါသည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မြူးနစ်မြို့အနီး၊ ဖရိုက်ဇင်းမြို့၊ သာရိပုတ္တအင်စတီကျုနှင့် ဗောဓိဝိဟာရတို့မှ ပင့်ဖိတ်ချက်အရ ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ ကြွရောက်ပြီး သာရိပုတ္တအင်စတီကျုတွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဖြင့် သာသနာပြုတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖွတ်မြို့၊ ဓမ္မဒူတမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွင် သာသနာပြုတာဝန်များ ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အရှင်ကုသလသာမိ(ပျော်ဘွယ်)၊ အတည်မဲ့၊ ဆူး၊ ဝင်းကြည်အောင် ဟူသော ကလောင်အမည်များဖြင့် စာပေများ ရေးသားခဲ့ဖူးပြီး ယခုအခါ အရှင်ကုသလသာမိ(အတည်မဲ့)ဟူသော ကလောင်ဖြင့် ရေးသားလျက်ရှိသည်။
Posted by lwin at 10:40 PM No comments:
ဆရာအောင်ဇော်မိုး အမေး၊ ဦးဇင်းအဖြေ
(လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လလောက်က ဆရာအောင်ဇော်မိုးက အောက်ပါ မေးခွန်းလေးခုကို ဆွေးနွေးပေးဖို့ လှမ်းပို့လာတယ်။ အခု ကွန်ပြူတာထဲ ဖိုင်တွေ ရှင်းရင်း တွေ့တာနဲ့ စိတ်ဝင်စားသူတွေလည်း ဖတ်နိုင်အောင် တင်ပြလိုက်တာပါ)
၁။ ပဋိပက္ခကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမလဲ
၂။ လူမူရေးပဋိပက္ခတွေက ဘယ်ကနေ လာတာလဲ
၃။ အကြမ်းဖက်မှုများကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းကျော်လွှားနိုင်မလဲ
၄။ ပဋိပက္ခဖြစ်သူနှစ်ဦးကြား ဘယ်လို ရင်ကြားစေ့သင့်သလဲ။
ဆရာမေးခွန်းက အဆင့်(၄)ဆင့်ရှိတယ်။ ပထမ၊ ဒုတိယနဲ့ စတုတ္ထမေးခွန်းတွေမှာ ပဋိပက္ခလို့ သုံးထားတယ်။ တတိယမေးခွန်းမှာတော့ အကြမ်းဖက်မှုလို့ သုံးထားတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုပဲ သုံးနှုန်းလိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာစကားတွေမှာလည်း အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခတွေလို့ အမြဲပဲ တွဲသုံးကြတယ်။
အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ စိတ်(နာမ်)ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အကြမ်းဖက်တာကတော့ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။
စိတ်(နာမ်)ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ကတော့ တစ်ခါတစ်ရံ သိမ်မွေ့ပါတယ်။ ဒီတော့ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်(နာမ်)ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခုခုကို ထိခိုက်သွားအောင်၊ နာကျင်သွားအောင်၊ ခံစားသွားရအောင် ပြုလုပ်ခြင်းကို အကြမ်းဖက်မှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်အရလို့ ပြောတဲ့အတွက် ငါးပါးသီလကို ကျူးလွန်နေခြင်းဟာ (သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ) အကြမ်းဖက်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ဘာသာတရားအရ သတ္တဝါလေးတွေကို သတ်တာဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရဖြစ်လို့ ဘာသာရေးအရ အကြမ်းဖက်မှု မမြောက်ပေမဲ့ သြစတေးလျစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒါလည်း အကြမ်းဖက်မှုတစ်မျိုးလို့ ဆိုကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် သတ္တဝါတစ်ဦးဦးကို ရုပ်ပိုင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းအားဖြင့် ထိခိုက်နာကျင်ခံစားရအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့အချက်မှန်သမျှကို အကြမ်းဖက်မှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ပဋိပက္ခဆိုတာကတော့ ပါဠိစကားလုံးပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Conflict လို့ ဆိုတယ်။ မြန်မာလိုတော့ ဆန့်ကျင်ဘက် သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခု ထိပ်တိုက်တိုးတာပေါ့လေ။ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခု ထိပ်တိုက်တိုးမှတော့ အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ ဖြစ်လာပြီပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေက အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခတွေလို့ တွဲသုံးလိုက်ကြတာဖြစ်မယ်။ ဒါကတော့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့။
(၂) အချက်က အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်က ပြောရမယ်ပေါ့လေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်အရလို့ ဆိုလေတော့ လေထိုးကြီးရိုးရိုးပဲဆိုဆို လူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားကနေ အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
လူတွေမှာ နေရာဒေသအရ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအရ၊ အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှုအရ လက်ခံယုံကြည်ပြီး ကျင့်သုံးနေကြတဲ့အရာတွေ၊ စွဲကိုင်လာတဲ့အရာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေအပေါ်မှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားတွေနဲ့ စွဲမြဲတည်းနှောင်ထားတယ်။ ငါတို့ဟာမှ ငါတို့ဟာ၊ ငါ့ဟာမှ ငါ၊ ငါ့အတွေးမှ ငါ့အတွေး၊ ငါ့ဘာသာမှ ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့လူမျိုးမှ ငါ့လူမျိုး … စတဲ့ လောဘအခြေခံကနေ ငါ့ရဲ့ ….၊ ငါတို့ရဲ့ …. ကို အခြားတစ်နေရာက မတူညီတဲ့အရာတစ်ခုက ထိခိုက်လာရင် ဒေါသတရားတွေ ပေါ်လာတာပဲ။
ဒါတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အခြေခံတာ သို့မဟုတ် အဖြေမရအောင် ပိတ်လှောင်ထားတာက မောဟတရားပဲ။
တစ်နည်းပြောရရင်တော့ ဒုစရိုက်တရား(၁ဝ)ပါးလို့ ဆိုရမယ်။
သူ့အသတ်သတ်တာ စတဲ့ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ မကောင်းမှု၊ လိမ်ညာပြောဆိုတာ စတဲ့ နှုတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မကောင်းမှု၊ သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကို မတရားကြံစည်မှုစတဲ့ စိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မကောင်းမှု ဒါတွေကို ကျူးလွန်တာဟာ အကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခတွေရဲ့ အကြောင်းတရားပဲ။ ဒါတွေကို ကျူးလွန်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသူတွေရဲ့ ရင်ထဲကနေ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
(၃) အချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီအကြမ်းဖက်မှုပဋိပက္ခတွေကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းကျော်လွှားနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ နံပါတ်(၂)အချက်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတရားတွေကို အမြစ်ပြတ်မဟုတ်ရင်တောင် ဒါတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်လွန်ကျူးတဲ့အဆင့်အထိ မရောက်အောင် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ့ ထိန်းသွားဖို့ပါပဲ။
တစ်နည်းပြောရရင်တော့ ဒုစရိုက်တရား(၁ဝ)ပါးကို ရှောင်ရှားပြီး သုစရိုက်တရား(၁ဝ)ပါးကို ဖြည့်ကျင့်ကြဖို့ပါပဲ။ သုစရိုက်တရားတွေ ထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှ အကြမ်းဖက်မှုတွေက လျှော့ပါးသွားမှာပါ။
သုစရိုက်တရားကို ဖြည့်ကျင့်တယ်ဆိုတာဟာ လူအချင်းချင်းကြားမှာသာမက သက်ရှိလောကတစ်ခုလုံးနဲ့ အပြန်အလှန်နားလည်ခြင်း၊ မေတ္တာထားခြင်း၊ ကိုယ်ချင်းစာခြင်း၊ တစ်ဦးကောင်းစားမှုအပေါ် တစ်ဦးက ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခြင်း၊ တစ်နည်းပြောရရင် အခြားဘာသာတစ်ခု ကြီးပွားတိုးတက်လျှင် သူတို့နှင့်ထပ်တူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပေးခြင်း စတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကို ဖြည့်ဆည်းတာကိုပြောတာပါ။
(၄)အချက်ဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ဘယ်လို ရင်ကြားစေ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ တစ်ဦးဦးက ပဋိပက္ခဖြစ်နေသူနှစ်ဦးကို ရင်ကြားစေ့ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို ရှာတဲ့သဘောလို့ ယူဆရတယ်။
ဒါကတော့ အဲဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေသူနှစ်ဦးက ဘယ်လို အကြောင်းအရာအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်သလဲဆိုတာနဲ့ လုံးဝသက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဘယ်လို ရင်ကြားစေ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကတော့ အဲဒီပဋိပက္ခကို သိနားလည်အောင် အရင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ပြေလည်စေချင်ရင် သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခကို နားလည်အောင် ကြိုးစားဖို့က အရင်ဆုံး လုပ်ရမယ့်အလုပ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခကို နားမလည်သေးသရွေ့ အဲဒီပဋိပက္ခကို ငြိမ်းအောင်လုပ်တာဟာ အချိန်ဖြုန်းတာပါပဲ။
ပဋိပက္ခကို နားလည်ပြီဆိုဦးတော့ ကိုယ့်မှာ ဖြည့်ဆည်းထားရမယ့် ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ ဗဟုသုတတွေ၊ ပါးနပ်မှုတွေ (ဆိုင်ရာပဋိပက္ခအလျောက်) အများကြီး လိုအပ်နေဦးမှာပါ။
ဝ၅၊ ဝ၉၊ ၂၀၁၄
Posted by lwin at 10:37 PM No comments:
ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀ကို တည်ဆောက်ကြသူများ
ကြာတော့ ကြာခဲ့လေပြီ။ ဘရူနိုင်း မယ်တော်ကြီးက ဒါနသီရိလင်္ကာအသင်း မဂ္ဂဇင်းအတွက် စာမူရေးပေးဖို့ ပြောခဲ့သည်။ အမှန်ဆိုရလျှင် ရေးချင်လွန်း၍သာ ရေးမည်ဟု ကတိပေးလိုက်သည်။ မည်သည့်အကြောင်းအရာကို ရေးရမည် မသိ။ ရေးစရာမရှိ၍ မဟုတ်၊ များလွန်းလို့ဟုသာ ဆိုရပေလိမ့်မည်။ ယခင်တစ်ကြိမ် ပုံနှိပ်စဉ်ကလည်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖူးပါသည်။ ထိုဆောင်းပါးရေးပို့စဉ်က စင်္ကာပူမယ်တော်ကြီး တည်းဖြတ်မှုကောင်းမွန်သဖြင့် ပေးချင်သည့်အကြောင်းအရာများ ကျန်နေခဲ့သည်။ ယခုအကြိမ်တွင် ဘရူနိုင်းမယ်တော်ကြီးက သူကိုယ်တိုင် တည်းဖြတ်ချင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်၊ သီလရှင်များအတွက် အလှူငွေများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များ ရှိနေသည့်ကြားက မဂ္ဂဇင်းအတွက်ပါ ကိုယ်စားလှယ်မလွှဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်လိုသော မယ်တော်ကြီးတို့၏ ၀ီရိယအစွမ်းမှာ ချီးကျူးအားကျဖွယ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၈-ခုနှစ် စာရေးသူ သီရိလင်္ကာသို့ စာသင်ရောက်ပြီး ၄-လခန့်ကြာသောအခါ ဒါနသီရိလင်္ကာအသင်း မယ်တော်ကြီးနှစ်ဦး သီရိလင်္ကာသို့ ရောက်လာပြီး စာသင်သားသံဃာတော်များနှင့် သီလရှင်များကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ဆုံပြီး အလှူငွေများနှင့် အခြားစားဖွယ်သောက်ဖွယ်များကို လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ မြန်မာရဟန်းတော်များ သီတင်းသုံးရာ မကုဋာရာမကျောင်းတွင် မယ်တော်ကြီးများ ရက်အနည်းငယ် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း မယ်တော်ကြီးများသည် အခန်းအောင်းမနေပါ။ ကျောင်းဆောင်အနှံ့သွားရောက်ပြီး “ဟိုဟာကတော့ ဟိုလို ဖြစ်နေတယ်၊ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ရမယ်၊ အရှင်ဘုရားတို့ မလုပ်ကြဘူးလား၊ ဒီရေမြောင်းတွေက ပိတ်နေတယ်၊ ဒီအဆောင်က ခြေသုတ်ခုံတွေက မကောင်းတော့ဘူး၊ အသစ်လဲပါလား၊ ကြည့်စမ်း … ဟိုဟာက ဟိုလို ဖြစ်နေပါလား၊ ဒီလိုဖြစ်နေပါလား”စသဖြင့် ရှာရှာဖွေဖွေ နှံ့နှံ့စပ်စပ် ပြောသည်။ နောက်ပြီး မယ်တော်ကြီးတို့ ကျောင်းအတွင်း ပြောနေပုံမှာ “တစ်ကျောင်းလုံး သံဃာများ ကြားစေသတည်း”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ထားသည့်အလား အသံကျယ်ကျယ် ပြောဆိုသည်ကို တွေ့ရသည်။ မယ်တော်ကြီးများ ဤသို့ဤဖုံ ပြောနေကြသည့်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်၍ စာရေးသူမှာ အဝေးကကြည့်ပြီး ချစ်ခင်လေးစားနေမိခဲ့ပါသည်။ မယ်တော်ကြီးတို့၏ ဟန်ပန်အမူအရာ၊ ပြောပုံဆိုပုံများမှာ တက်လည်း တက်ကြွသည့်ဟန် ရှိသည်။ စေ့စပ်သည့်ဟန်လည်း ပေါက်သည်။
“သားတော်သံဃာတော်များအပေါ်တွင် ဒီထိတောင် Care လုပ်တယ်”ဟု ပြသနေသည့်သဏ္ဍာန် ရှိသည်။ ဤသည်မှာ စာရေးသူအတွက် မယ်တော်ကြီးများအား ပထမဆုံး တွေ့ဆုံဖူးခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈-ခုနှစ် မယ်တော်ကြီးတို့ခရီးစဉ်အတွင်း မယ်တော်ကြီးများနှင့် ရင်းနှီးတွေ့ဆုံခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
မယ်တော်ကြီးများ ပြန်သွားသောအခါ အခါအားလျော်စွာ မယ်တော်ကြီးများကို သတိရပါသည်။ မေတ္တာပို့ပါသည်။ မယ်တော်ကြီးများနှင့် စကားပြောလိုသော စိတ်များလည်း မကြာခဏ ဖြစ်မိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အရေးကြီးကိစ္စတွေ များလှသော မယ်တော်ကြီးများကို အနှောက်အယှက်မပေးလိုသဖြင့် မိတ်ဆက်စကားပြောဆိုခြင်း မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
၂၀၀၉-ခုနှစ်တွင် မယ်တော်ကြီးများ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ တစ်ခေါက် ရောက်လာခဲ့ကြပြန်သည်။ မယ်တော်ကြီးတို့ သီရိလင်္ကာရောက်သောအခါ စာရေးသူက ဒေါက်တာဇနိတ (သြစတေးလျ)၊ အခြားသံဃာလေးပါးနှင့်အတူ စိတ္တလပဗ္ဗတတောင်မှ တရားထိုင်ပြီး ပြန်လာသည့်အချိန် ဖြစ်သည်။
ဘရူနိုင်းမယ်တော်ကြီးက မြေဇင်းနည်းဖြင့် တရားအားထုတ်ဖူးရာမှ စတင်ပြီး မယ်တော်ကြီးက တွေ့ချင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့် မယ်တော်ကြီးများနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် စကားပြောဖူးခဲ့သည်။ တကယ့်အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့် တရင်းတနှီး စကားပြောရသလို ကျေနပ်ခဲ့သည်။
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာသည် ဗုဒ္ဓဂယာနှင့်အခြား မြင့်မြတ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ နေထိုင်သည့်ဝန်းကျင်သို့ သွားရောက်ပြီး သူတော်ကောင်းဓာတ်ကို ထုံကူးလေ့ရှိသည်ဟု ကြားဖူးသည်။ စာရေးသူဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆရာကြီး၏ သူတော်ကောင်းဓာတ်ထုံကူးသည့် သဘောတရားကို သတိထားပြုကျင့်ခဲ့ဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် မယ်တော်ကြီးများနှင့် စကားပြောသည့်အခါ ထိုသဘောတရားကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်သည်။
မယ်တော်ကြီးများသည် အရိယာသူတော်စင်များ မဟုတ်သည့်တိုင် ကူးယူထုံပွားသင့်သော အလေ့အလာ၊ အမူအကျင့်များ များစွာရှိနေသည်ဟု ခံစားရသည်။
မယ်တော်ကြီးများသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ရောက်သည့်အခါတိုင်း စာသင်သားသံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များကိုသာ လှူဒါန်းလေ့ရှိသည်မဟုတ်၊ အနုရာဓပူရမြို့ရှိ မြန်မာကျောင်း၊ ကန္ဒီမြို့ရှိ မြန်မာကျောင်းတို့ကိုလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းလေ့ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ မယ်တော်ကြီးများသည် နာယကဆရာတော်များနှင့်အတူ အဆိုပါ ကျောင်းများသို့ ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ သွားရောက်လှူဒါန်းသည်။
ဤနှစ်အလှူခရီးစဉ်တွင် နာယကဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သော ဦးအဂ္ဂ၀ံသက သူ့အစား မယ်တော်ကြီးများနှင့် လိုက်သွားပါဟုဆိုသဖြင့် အနုရာဓ၊ ကန္ဒီ ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါခဲ့ရသည်။ စာရေးသူတွင် မယ်တော်ကြီးများနှင့် ပတ်သက်၍ စပ်စုလိုသည်များက များစွာပင် ရှိနေသည်။ ကားပေါ်ရောက်သောအခါ “မယ်တော်ကြီးများ ခရီးပန်းလိမ့်မည်၊ နောက်မှ စပ်စုတာကောင်းပါတယ်”ဟု တွေးနေခဲ့မိသည်။ သို့ရာတွင် စာရေးသူအထင် တက်တက်စင်အောင် လွဲပါသည်။
လမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံး မယ်တော်ကြီးများ၊ အထူးသဖြင့် ဘရူနိုင်းမယ်တော်ကြီးက မှတ်သားစရာ စကားများကို မနားတမ်း ပြောပါသည်။ မယ်တော်ကြီးပြောသမျှစကားများကို မမှတ်မိတော့သော်လည်း ရိုးသားပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ကြိုးစားဖို့နှင့် အများအကျိုးကို အားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းချက်များကိုတော့ မှတ်မိနေပါသည်။
ကန္ဒီမြို့သို့ ရောက်သောအခါ ည ၁၀-နာရီခန့် ရှိလေပြီ။ ရောက်သည်နှင့် ဆရာတော်အား ကန်တော့ပြီး စာရေးသူတို့ လူငယ်ဦးဇင်းများက ရေးမိုးချိုးကာ အခန်းတွင်းဝင် အေးအေးသက်သာ နေခဲ့ကြသည်။ မယ်တော်ကြီးများလည်း ခရီးပန်းပြီး အိပ်ပျော်နေလောက်ပြီဟု ထင်ခဲ့သည်။ ည
၁၁-ခွဲခန့်ရောက်သောအခါ ရေသောက်လိုသဖြင့် ဆွမ်းစားခန်းသို့ သွားသောအခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်မိစေသော မြင်ကွင်းကို မြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုမြင်ကွင်းမှာ မယ်တော်ကြီးနှစ်ယောက်မှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ကိုင်ပြီး အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ “လူငယ်ဖြစ်တဲ့ ငါတို့က ပင်ပန်းပြီး နှပ်နေလိုက်တာ၊ အမေအရွယ်မက အဘွားအရွယ် မယ်တော်ကြီးတွေက မနက် သားတော်တွေ စားဖို့အတွက်ဆိုပြီး ဒီအချိန်အထိ အနားယူချိန်မရ၊ ချက်ပြုတ်နေကြပါလား”ဟု တွေးမိပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးဖျန်းဖျန်း ထမိပါသည်။
စာရေးသူမှာ ယနေ့အချိန်အထိ လူငယ်များကို ဆုံးမစကားပြောကြားသည့်အခါတိုင်း၊ ဇွဲသတ္တိနှင့် အားကြိုးမာန်တက် အလုပ်လုပ်ကြဖို့ စကားပြောကြသည့်အခါတိုင်း မယ်တော်ကြီးများအကြောင်းကို အမြဲတစေ ထည့်ပြောမိခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မယ်တော်ကြီးများမှာ စာရေးသူ၏ ဇာတ်လိုက်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၀-ခုနှစ်တွင် စာရေးသူသည် သီရိလင်္ကာမှ ထွက်ခွါခဲ့သည်။ “မယ်တော်ကြီးက ဘာဆက်လုပ်မလဲ၊ Ph. D လုပ်ရင် ထောက်ပံ့မယ်”ဟု ဆိုလာပါသည်။ စာရေးသူက “မယ်တော်ကြီး၊ ဒီအသင်းဟာ ဒါနသီရိလင်္ကာအသင်း ဖြစ်တယ်၊ ဦးဇင်းက အိန္ဒိယမှာ လုပ်မှာ၊ ဒါနအိန္ဒိယအသင်း မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် အလှူမခံလိုပါဘူး”ဟု စိတ်ရင်းအတိုင်း ပြောမိခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဘရူနိုင်းမယ်တော်ကြီးမှ “မပူပါနဲ့၊ ဒါနသီရိလင်္ကာအသင်း ငွေထဲက မလှူပါဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်ငွေထဲကနေ လှူမှာပါ”ဟု ဆိုသဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ မည်သည့်အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ် သူ့အစဉ်အလာ၊ သူ့မူ၊ သူ့ရည်ရွယ်ချက် စသည် အသီးသီး ရှိကြပေလိမ့်မည်။ စာရေးသူအနေဖြင့် ဒါနသီရိလင်္ကာအသင်းသည် သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာစာသင်သားရဟန်းတော်၊ သီလရှင်များအတွက်သာ ဖြစ်နေသည်ကို မြင်လိုပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းလိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်းအလိုက်ဖြစ်စေ အလှူခံလာပါက စေတနာအားကောင်းသည့် မယ်တော်ကြီးများဖြစ်သဖြင့် လှူဒါန်းဖြစ်ဖို့ များပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒါနသီရိလင်္ကာအသင်း အလှူငွေများမှ အခြားနေရာတစ်ခုခုသို့ ဒေါ်လာ ၅၀၀-လျော့သွားပါက သီရိလင်္ကာစာသင်သားများအတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀-လျော့နည်းသွားသည်နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အခါကမျှ အလှူခံခြင်း မပြုခဲ့ဖူးပါ။
၂၀၁၂-ခုနှစ်တွင် ဘရူနိုင်းမယ်တော်ကြီးနှင့် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆုံတွေ့ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မယ်တော်ကြီးမှာ သူ၏ ဇာတိ ညောင်လေးပင်မြို့၊ လက်ပံဘုရွာ၌ မွေးဖွားရာဒေသကို ကျေးဇူးပြန်လည် တုံ့ဆပ်သည့်အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ၇-ရက် တရားစခန်းကျင်းပပေးနေခဲ့သည်။
စာရေးသူကလည်း သီရိလင်္ကာမှ စာသင်ပြန်လာသော သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန်းဒေးဓမ္မစကူးလ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စွမ်းအားရှိသမျှ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးနေချိန်ဖြစ်သဖြင့် မအားမလပ်နိုင် ဖြစ်နေသည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မယ်တော်ကြီး၏ အမူအကျင့်၊ စိတ်ဓာတ်၊ သတ္တိနှင့် လေးစားအတုယူစရာ ရပ်တည်ချက်များ၊ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်မှုများကို အနီးကပ် ဓာတ်ကူးလိုသဖြင့် မယ်တော်ကြီးနှင့်အတူ လိုက်ပါဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လိုက်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။
မယ်တော်ကြီးမှာ အနည်းငယ် ၀ လာသည်။ အထိုင်အထတွင် ဒူးက အနည်းငယ် နာသည်ဟု ဆိုသောအခါ ၀မ်းနည်းသလိုလို သနားမိသလိုလို ခံစားခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ခဲ့သော ၃-နှစ်က သွက်လက်မှု၊ ဖျပ်လက်မှုတို့နှင့် ဘာမျှ ခြားနားသည်ဟု မထင်ခဲ့မိပေ။ “ငါတော့ အိုသွားပြီ၊ ဘာမျှ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး”ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်အရိပ်အယောင်မျိုး အနည်းငယ်မျှ မတွေ့ခဲ့ရ။ ဇာတိရွာလေးသို့ ရောက်သည်နှင့် ထုံးစံအတိုင်း နှုတ်ဆက်သင့်သူများကို နှုတ်ဆက်ပြီး ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လိုက်လုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
မယ်တော်ကြီး၏ ဇာတိရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းနှစ်ခုနှင့် သိမ် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ နှစ်စဉ် ငွေကြေးအကုန်အကျခံကာ တရားစခန်းများ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ ပညာတော်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ရန် ကျောင်းစရိတ်လှူဒါန်းခြင်း စသော ပရဟိတ သို့မဟုတ် လူသားအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ထားသည်ကို အားကျအတုယူဖွယ် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
မယ်တော်ကြီး၏ ဇာတိရွာတွင် အသက် ၈၇-နှစ်ရှိသော်လည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဆဲဖြစ်သော ဆရာတော်ကြီးကိုလည်း ဖူးတွေ့ခဲ့ရသည်။ မယ်တော်ကြီးနှင့် မောင်နှမတော်စပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုဆရာတော်ကြီးကို “အသက်ရှည်အောင်၊ ကျန်းမာအောင် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမလဲဘုရား”ဟု မေးလျှောက်သောအခါ ဆရာတော်ကြီးက “အသက်ရှည်ချင်ရင် သူတစ်ပါးတွေ အသက်ရှည်အောင် လုပ်ပေး၊ ကျန်းမာချင်ရင် သူတစ်ပါးတွေကို ကျန်းမာအောင် လုပ်ပေး၊ ဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်း မရှိဘူး”ဟု မိန့်ပါသည်။
မယ်တော်ကြီး၏ ဇာတိရွာတွင် တစ်ညအိပ်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ပြန်လာခါနီးတွင် မယ်တော်ကြီးကို “မယ်တော်ကြီး ဦးဇင်းတို့ကို ဘာအကြံပေးစရာ ရှိလဲ၊ ဘာလုပ်စေချင်သလဲ”ဟု မေးခွန်းတစ်ခု မေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ မယ်တော်ကြီးက “ဦးဇင်းမှ မဟုတ်ဘူး၊ တပည့်တော်နဲ့ ဆက်စပ်သူအားလုံးကို တပည့်တော် အမြဲတမ်း ပြောတယ်၊ နေရာအကျယ်ကြီးကို အသာထားလိုက်အုံး၊ အနည်းဆုံး ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာ ကောင်းစားရေးကို လုပ်ကြစေချင်တယ်၊ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဒေသကောင်းစားရေး၊ တိုးတက်ရေးကို လုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ရှိကြတယ်ဆိုရင် ဒေသတိုင်းဒေသတိုင်း တိုးတက်လာမှာပဲ”ဟု အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“မယ်တော်ကြီး ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တာလည်း လုပ်ပေါ့၊ သီရိလင်္ကာသံဃာတွေအတွက် မယ်တော်ကြီး အသက်ရှည်ဖို့ လိုတယ်”ဟု ဆိုသောအခါ မယ်တော်ကြီးက “ရတယ်၊ ဘာမှ မပူနဲ့၊ တပည့်တော်က အသက်မထွက်သေးသရွေ့ အလုပ်လုပ်မှာ၊ တပည့်တော်က ရောဂါတွေ ခံစားပြီး နေရတာ မဖြစ်ချင်ဘူး။ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ဗြုန်းဆို ဘာဝေဒနာမှ မခံစားရဘဲ သေချင်တာ”ဟု ဆိုပါသည်။
“လောကကြီးအတွက် ပေးဆပ်ခြင်းများနဲ့ ဘ၀ကို တည်ဆောက်ထားသူများပါလား”ဟု ရေရွတ်နေခဲ့မိပါသည်။
အပြန်ခရီးတွင် ဆောင်းရာသီ အအေးဓာတ်က သိသိသာသာ အေးမြနေခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သီရိလင်္ကာစာသင်သားများအတွက် သိန်းပေါင်းထောင်ချီလှူဒါန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်စွမ်းသော မယ်တော်ကြီးတို့၏ ပုံရိပ်များကို စဉ်းစားမိသောအခါ ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးမှု၊ အတုယူအားကျမှုများနှင့်အတူ ရင်ခွင်တစ်ခုလုံး လန်းဆန်းတက်ကြွနေခဲ့သည်။ “ကဲ … ဟုတ်ပြီ၊ မယ်တော်ကြီးများက တက်ကြွမှု၊ တည်ကြည်မှု၊ ရိုးသားမှု အားမာန်များဖြင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ဆောင်ပေးနေခဲ့ကြပြီ၊ ငါတို့ သီရိလင်္ကာရောက်မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်၊ သီလရှင်များကရော ဘယ်လိုလဲ၊ မယ်တော်ကြီးများလို ပရဟိတလုပ်ငန်းများ လုပ်ဖူးလား၊ လုပ်နေလား၊ လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိသလား၊ ကာလသုံးပါးထဲက တစ်ခုခုနဲ့ နီးစပ်ဖို့တော့ ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်လူရေ … တောင်ပံခတ်ဖို့ အားယူနေတဲ့ အမိမြန်မာပြည်က မင်းကို စောင့်နေပြီ”။
မိမိကိုယ်ကိုယ် တီးတိုးပြောနေမိသော စကားလုံးများက နှလုံးသားနံရံတစ်ခုလုံးကို ပဲ့တင်ထပ်နေခဲ့လေသည်။ ဥဒဟိုပြေးလွှားနေသော ဘတ်စ်ကားကြီး၏နောက်တွင် မယ်တော်ကြီးတို့၏ ဇွဲသတ္တိအားမာန်များက အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လိုက်ပါလာကြသည်။
Posted by lwin at 10:36 PM No comments:
Posted by lwin at 8:28 PM No comments:
စကန်ဒီနေဗီးယားတိုင်းပြည်များသို့ ခရီး (အပိုင်း ၁၊ ...